“Raharaha Antsakabary Befandriana Avaratra” : vonona hampihavana sy ho elanelam-panahy ny FJKM | NewsMada
“Raharaha Antsakabary Befandriana Avaratra” : vonona hampihavana sy ho elanelam-panahy ny FJKM
Par Taratra sur 11/03/2017
“Miantso fifanatonana sy fifamelana eo amin’ny andaniny sy ny ankilany izahay, ary vonona hijoro ho mpampihavana sy elanelam-panahy amin’ny fotoana rehetra. Sambatra ny mampihavana, fa izy no atao hoe zanak’Andriamanitra (Mat 5: 9).”
Io ny ny hafatra pastoralin’ny birao foiben’ny FJKM ho an’ny mpitandrina sy ny fiangonana, afakomaly. Manao sonia izany ny filoha ny FJKM, ny pasitera Andriamahazosoa Irako Ammi, manoloana ny “Raharaha Antsakabary, Befandriana Avaratra”.
Miantso ny vahoakan’Andriamanitra rehetra hitondra amim-bavaka hatrany ny firenentsika izy, ary mampahery ny mpino amin’ny asa fitoriana ny Filazantsara sy ny fijoroana vavolombelona amin’ny fanasina sy fanazavana azy.
Manao antso sy manaitra ny tomponandraikitra eto amin’ny tany sy ny firenena ny FJKM, ary mampahery azy ireo mba handray andraikitra tandrify azy mba hiainan’ny vahoaka ao anatin’ny fandriampahalemana sy ny fiadanana.
Fiarahamonina tsy mirindra… ny fitsaram-bahoaka
Eo anatrehan’ny toe-java-mitranga eto amin’ny firenena, mahatsapa ny fisian’ny fiarahamonina tsy mirindra ka isian’ny fitsaram-bahoaka sy ny ain’olona latsaka ny FJKM. Eo koa ny hetraketraka atao amin’ny fiangonana: fandorana sy ny fihanaky ny fahalovana eo amin’ny sehatra samihafa, ny fahasahiranana mahazo ny mpiara-belona.
Porofon’izany ny zava-nitranga tany amin’ny kaominina ambanivohitra Antsakabary, distrikan’i Befandriana Avaratra, izay namoizana ain’olona sy nahasimbana fananana. Anisan’izany ireo kristianina misy 25 tafo tao Antanantanana sy Ambalamanga, ary ny tao Androra Angavola sy Vohitsara. May ny fiangonana iray sy trano iray fanaovana vondrom-bavaka.
Maneho fiombonana alahelo sy fampaherezana ho an’ireo traboina ny fiangonana. Manaitra ny sain’ny rehetra: sarobidy ny aina, satria endrik’Andriamanitra. Tokony hapetraka amin’ny hasiny sy ny hajany ny tsirairay. Mivavaka ho an’ireo rehetra voakasik’ireny raharaha ireny ny FJKM, ary manao antso avo amin’ny hisian’ny fifanomezan-tanana amin’ireo tratran’ny voina sy ny fanarenana ny rava.